Ny P&O Cruises Aostralia dia nanitatra fiatoana tany New Zealand
Home » Lahatsoratra farany farany » Cruising » Ny P&O Cruises Aostralia dia nanitatra fiatoana tany New Zealand
Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Cruising • Vaovao lafo vidy • Vaovao Vaovao Vaovao Vaovao • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Fitsangatsanganana P&O Aostralianina dia manitatra ny fijanonany miasa any New Zealand hivoaka amin'ny alalàn'ny 25 aprily 2021 satria ny sambo fitsangantsanganana sy ny indostria midadasika dia manohy miasa miaraka amin'ny governemanta sy ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fotoana mety hanombohana indray ny sambo.
Ny sambo fitsangantsanganana, izay niorina sambo tao Auckland nandritra ny taona maro, dia hiverina any Nouvelle-Zélande mandritra ny vanim-potoana 150 andro voatokana amin'ny Jolay 2022.
Ny filohan'ny P&O Cruises Australia Sture Myrmell dia nilaza fa ny fiandohan'ny taona vaovao dia nitondra fanantenana sy fahatokisan-tena nohavaozina nefa, miaraka amin'izay koa, zava-dehibe ny mijanona ho zava-misy amin'ny ho avy akaiky kokoa.
“Fantatsika fa mbola hisy andro tsara lavitra ho avy ary mijanona ho miabo amin'ny fiverenan'ny sambo fitsangantsanganana ihany izahay. Nandritra ny fijanonantsika niasa, ny P&O Cruises miaraka amin'ny indostria midadasika dia nampiasa fotoana tamim-pahendrena mba handaminana ny fiverenan'ny fitsangantsanganana ", hoy Atoa Myrmell.
"Rehefa miezaka manatratra an'io tanjona io izahay, dia te hanome antoka an'ireo vahiny Kiwi araka izay azo atao sy fahaiza-manao mifanaraka amin'ny famandrihana 2021 azy ireo ary fotoana iray ahafahana mamerina mandahatra ny fialantsasatra fitsangantsanganana nataony tamin'ny 2022 na mihoatra.
"Te-hisaotra an'ireo vahiny avy any Nouvelle Zélande aho noho ny tsy fivadihan'izy ireo tamin'ny P&O Cruises Australia nandritra io fotoana io ary manantena ny handray azy ireo an-tsambo indray izahay."
Voalahatra ny hanomboka sambo avy any Auckland manomboka amin'ny 6 Febroary 2021, ny asan'ny Pacific Explorer dia naato tamin'ny 4 martsa 2021 ary naato amin'ny 25 aprily izao.
Any Aostralia, ny Pacific Adventure dia voalahatra hanomboka sambo avy any Sydney amin'ny 30 aprily 2021 raha toa kosa i Pacific Encounter ka miantso ny tranony Brisbane manomboka ny 7 Mey - na dia azo ampiana mialoha aza ny dia lavitra, arakaraka ny fotoana fiverenan'ny sambo fitsangantsanganana any Aostralia .
Misy fiatraikany amin'ireto fitsangantsanganana manaraka ireto ny fiatoana maharitra amin'ny asa any New Zealand:
Safidy famandrihana sy famerenam-bola ho an'ny fitsangantsanganana nesorina nanomboka ny 7 Janoary 2021:
Ny P&O dia hifandray amin'ireo vahiny izay voakasik ny fitsangatsanganana an-tsambo, na mivantana na tamin'ny alàlan'ny masoivohon'ny dia notondroin'izy ireo hampahafantatra azy ireo izany fivoarana izany sy ireo safidy azony atao.
Ny vahiny izay mbola tsy nahazo tolotra ho valin'ny fitsangantsanganana iray izay nofoanana nandritra ny fijanonan'i P & O dia afaka mahazo tamberim-bola feno na tamberim-bola eny ifotony raha misafidy trosa fitsangatsanganana amin'ny ho avy izy ireo.
P&O dia handoa famerenam-bola hiverina amin'ny agents traveller ho an'ny vahiny namandrika tamin'io fantsona io. Ny tsipika fitsangantsanganana dia hiaro ny komisionan'ny masoivoho amin'ny famandrihana rehetra ho an'ny fitsangantsanganana nesorina izay naloan'ny 5 janoary 2021.
Ireo vahiny manana famandrihana voakasiky ny fiatoana am-piasana, dia afaka manara-maso ny fivoaran'ny crédit cruise ho avy na ny fangatahana famerenam-bola amin'ny alàlan'ny fitaovana fanarahana vaovao hita ao amin'ny tranonkalan'i P & O.